श्रीमती नछुने भएपछि श्रीमानले के गर्ने ? हरेक पुरुषले एकपटक पढ्नैपर्ने – Pahilo Page
श्रीमती नछुने भएपछि श्रीमानले के गर्ने ? हरेक पुरुषले एकपटक पढ्नैपर्ने
१८ बैशाख २०७६, बुधबार १७:३२ 2580 पटक हेरिएको
महिनावारी (गाउँमा नछुने पनि भनिन्छ) को क्रममा महिलामा विभिन्न शारीरिक र मानसिक परिवर्तन हुने गर्दछ । यो क्रममा महिलाले आफ्नो पुरुष साथीसँग सहयोग र सहानुभूतिको आशा गरेका हुन्छन् । र, आशाअनुरुप नतिजा पाए महिलाहरुको आधा पीडा कम हुने गर्दछ ।
महिनावारीको क्रममा के गर्ने पुरुषले ? बम्बे हस्पिटलकी गाइनोकोलोजिस्ट डा. निरजा पौराणिकरुपमा भनिएजस्तो पुरुषले महिला महिनावारी हुँदा फोहर वा असामान्य गतिविधिको रुपमा व्यवहार गर्नु हुँदैन । महिलाले यो क्रममा किचनमा जान नहुने, खानपिनका वस्तुहरु छुन नहुनेजस्ता कुराको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । पुरुषले आफ्नो महिला साथीलाई कामकाजमा सहयोग गर्ने र उनको मुडलाई बुझेर डिस्टर्ब गर्नुहुँदैन ।
मूडलाई बुझ्नुहोस ः
महिनावारी हुँदा महिलामा चिड्चिडापन बढ्ने गर्दछ । उनको मुड बुझेर आपसी सहयोग गर्नुहोन् । तातो पानी दिनुहोस् । महिनावारी हुँदा पेट दुख्नु साधारण कुरा हो । हट वाटर ब्यागमार्फत पेट दुखाईबाट राहत पाउन सकिन्छ । डार्क चकलेट खुवाउनुहोस् । डार्क चकलेटमा पाइने फ्लेवनाइड्सले मूडलाई राम्रो बनाउने गर्दछ । तरकारी र फलफूल खुवाउनुहोस् । केरा, मेवालगायतका फलफूल र हरिया तरकारीले महिनावारीको समस्यालाई कम गर्दछ ।
मसाज गर्नुहोस ः
महिनावारीका बेला महिलालाई कम्मर दुख्नेलगायतका समस्या हुने गर्दछ । तपाईंले हल्का हातको मसाजले उनलाई राहत दिनेछ । व्यायाम गराउनुहोस् । हल्काफुल्का व्यायाम वा योगाबाट पेट र ढाड दुखाईबाट राहत प्राप्त हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै पानी पिउन लगाउनुहोस् । महिनावारी हुँदा शरीरमा जति पानी हुन्छ, पीडा त्यति नै कम हुने गर्दछ । आराम गर्न दिनुहोस् । तपाईंको साथीलाई महिनावारी हुँदा धेरै काम गर्न नदिनुहोस् । आराम गर्दा समस्या कम हुनेछ ।
चिया–कफी वा मसालेदार खानेकुरा नदिनुहोस् । मसालेदार खानेकुरा र क्याफेनले महिनावारीको पीडालाई बढाउने गर्दछ । डाक्टरलाई भेट्नुहोस् । यदि रक्तश्राव अत्यधिक भइरहेको छ भने डाक्टरलाई भेट्न जानुहोस् ।
घोराहीेको नयाँ बसपार्कमा अम्बिकेश्वरी डेन्टल एण्ड फार्मेसी उद्घाटन
अछामको बयालपाटा अस्पतालका १९ जना कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि
देशभर १०८ जनामा कोरोना संक्रमण, एकजनाको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ५० जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि
अचम्मका हुँदारहेछन् महिलाका सेक्स चाहना, हेर्नुहोस् १० रोचक तथ्य
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी, अब ओपिडी सेवा ठप्प